किन हाम्रो शरिरमा पसिना आउँछ ? यस्ले हाम्रो अनुहार्मा असर गर्छ त ? जान्नुहोस र सचेत हुनुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य किन हाम्रो शरिरमा पसिना आउँछ ? यस्ले हाम्रो अनुहार्मा असर गर्छ त...
किन हाम्रो शरिरमा पसिना आउँछ ? यस्ले हाम्रो अनुहार्मा असर गर्छ त ? जान्नुहोस र सचेत हुनुहोस
अत्यधिक पसिना, यो सामान्य शारीरिक समारोह हो जसले हाम्रो तापक्रमलाई नियमित गर्न मद्दत गर्दछ। व्यक्तिहरू प्राय: उनीहरूको अनुहार, टाउको, अण्डरमहरू, हात, खुट्टा र मुर्तिबाट पसिना आउँछन्।
यदि तपाईले आफ्नो टाउको र अनुहारबाट अत्यधिक पसिना लिनुभयो भने, विशेष गरी तपाईलाई क्रानोफेशियल हाइपरहाइड्रोसिस भनिने अवस्था हुन सक्छ। हाइपरहाइड्रोसिस भनेको सामान्य शरीरको तापक्रम कायम गर्न आवश्यक भन्दा बढि पसिना आउनु हो। यो गीलोपनबाट टिप्न गहिराइमा पर्न सक्छ।
यदि तपाइँ आफ्नो अनुहार र टाउको नियमित आधारमा धेरै पसिना पाउनुभयो भने, जब तपाइँ तातो, तनावग्रस्त, व्यायाम, वा मसलादार खाना खानुहुन्न भने पनि तपाईले यो अवस्थाको अनुभव गरिरहनु भएको छ। टाउको र अनुहारको अत्यधिक पसिनाले पिरोल्दा महसुस गर्न सक्छ वा सामाजिक अवस्थाहरूमा तपाईंलाई असहज बनाउन सक्छ। शुभ समाचार यो छ कि धेरै उपचार विकल्पहरू छन्।
किन यसले अनुहारलाई असर गर्छ?
जबकि हाइपरहाइड्रोसिस शरीरको कुनै पनि भागमा हुन सक्छ, अनुहार र टाउकोमा ठूलो संख्यामा पसिना ग्रंथिहरू हुन्छन्। त्यसोभए, यदि तपाईं अत्यधिक पसिना लिने खतरामा हुनुहुन्छ भने, ती क्षेत्रहरूमा यो अधिक ध्यान दिन सकिन्छ। एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि ३० देखि ५० प्रतिशत विश्वसनीय स्रोतहरू जो व्यक्तिले यस प्रकारको पसीना अनुभव गर्दछन् यसको पारिवारिक इतिहास छ। यदि तपाईले फेला पार्नुभयो कि तपाईको अनुहार पसिना झर्दै छ भने, यो राम्रो विचार हो तपाईको डाक्टरसँग भेट गर्न।
यदि तपाईको पसिना वास्तवमा चिकित्सा अवस्थाको कारण हो भने यो निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ, जुन गम्भीर हुन सक्छ। यदि तपाइँको डाक्टरले तपाईको पसीना अरु मेडिकल अवस्था संग सम्बन्धित छैन भनेर निर्धारण गर्दछ भने, तिनीहरूले तपाईलाई राम्रो उपचार विकल्प पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।
Previous articleबढी भाडा लिने आठजनालाई प्रहरीले समातेको
Next articleडुबाइदियो २ लाख रुपैयाँ, सात वर्षको छोरोलाई फोन खेल्न दिएर, हेर्नुस यसरी